မိုးစက်ပွင့်: ဟားခါး၊ စတော်ဘယ်ရီ နှင့် အမှတ်တရများ
Phyo Evergreen9May 2013 at 22:01
ပုံ ၁ နဲ့ ရွာကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ကတယ်လှတယ်... တောင်တန်းတွေနဲ့..။ စတော်ဘယ်ရီကတော့ အကြိုက်ဆုံးအသီးဆိုတော့ ဂလုဂလုဖြစ်သွားတယ်..နို့ဆီလေးနဲ့စားလိုက်ရ..။
Phyo Evergreen9May 2013 at 22:02
"တကယ်" ရေးတာ.. "ကတယ်" ဖြစ်သွားတယ်..။
အီးတီ9May 2013 at 23:16
စူးနှယျလေး 10 May 2013 at 00:01
မြသွေးနီ 10 May 2013 at 15:56
ဟားခါးမြို့ရဲ့ ချစ်စရာသဘာဝနဲ့အလှကို မျှဝေခံစားသွားပါတယ်ညီမရေ..
I like HarKhar.
I also noticed that the face of the girls from the southern chin and Harkhar are different. I personally think Harkhar girls have oval shape face and they are prettier,(my personal thought), southern girls are still prettier than me though.
I am just saying that they have different shape of face. :D
Your post always makes me recall my sweet memories of country trip.
ဇင်မျိုး 13 June 2013 at 17:00
အလုပ်နဲ့တုန်းက ဟားခါးကို သွားချင်ခဲ့တာ ဆရာမရေ အခုထိလည်း အခွင့်အရေးက မပေးသေးပါဘူး... သွားဖို့တော့ မျှော်လင့်တုန်းပါပဲ...
Anonymous 29 October 2013 at 08:26
blackroze 24 November 2013 at 01:34
adrobook 23 July 2019 at 14:11